I-Russia ijoyine i-China kwaye ikwathintela ii-VPNs | Iindaba zeGajethi
I-Russia ijoyina iTshayina kunye neeBhloko zeVPNs nayo
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ngomgaqo omtsha kwi-intanethi urhulumente waseTshayina ebesandula ukuwenza ngokusemthethweni: vimba iinkonzo zelizwe zeVPN, Ukuze ulawule lonke ulwazi olunokufikelela kubasebenzisi kweli lizwe. Kwiintsuku ezidlulileyo, urhulumente wase-China naye wacanda amaphiko ka-WhatsApp ukuphelisa naluphi na ukhetho lokundwendwela amakhonkco ewebhu athunyelwe ngeqonga lemiyalezo, kunye nethuba lokufumana imifanekiso okanye iividiyo ngokusebenzisa umyalezo weqonga. Kodwa kubonakala ngathi I-China ayililo kuphela ilizwe eliqwalaselweyo malunga nokuNjengoko iRussia ibhengeze nje ukuba abaqhubi kufuneka bavimbe zonke iinkonzo ze-VPN ezikhoyo kweli lizwe.
Ngale ndlela, bonke abasebenzisi ababonelela nge-Intanethi kubaxumi babo elizweni banyanzelekile ukuba banqumamise ukufikelela kuzo zonke ezi ntlobo zeenkonzo, nokuba kungokuya kwiwebhusayithi okanye kusetyenziswa izixhobo zefowuni. Isizathu sikarhulumente waseRussia sokuthintela ubuxoki bobugebenga kwilizwe eli. Olu hlobo lwenkonzo alusetyenziswanga kuphela ukufikelela kumxholo ovaliweyo ngokwendawo kodwa lukwasetyenziswa ngokubanzi ziinkampani ezininzi, yiyo loo nto e-China iinkampani ezinkulu azinalo olu khetho lilinganiselweyo, into eyenzekayo eRashiya.
Kwiminyaka yakutshanje, iRussia ihambile ekubeni lilizwe apho inkululeko yayingaphezulu kwako konke ukuya ekubeni lilizwe apho ulawulo kulwazi olujikeleza kwi-Intanethi lube yingxaki kurhulumente. Kodwa IRashiya ne China ayizizo zodwa, kodwa ngokucacileyo zezona zibetha kakhulu ngenxa yenani elikhulu labantu abachaphazelekayo kolu hlobo lomlinganiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Russia ijoyina iTshayina kunye neeBhloko zeVPNs nayo
IiYayonauts, zezona zichaphazeleka kakhulu kwiingozi ze-intanethi